Enwekwu ọdịnaya, Nsogbu ndị ọzọ: Mgbalị nke Ahịa Rep | Martech Zone
Enwekwu ọdịnaya, Nsogbu ndị ọzọ: Mgbalị nke Ahịa Ahịa
Anyị na-na-e bipụtara nnọọ a bit banyere ngwá ọrụ ndị na-kwe ka ahịa na ahịa mgbalị. N'uche m, ndị nnọchi anya ahịa nwere ọrụ siri ike karị na-arụ n'oge a. 59% nke oge ha na-arụ ọrụ ndị ọzọ karịa ire ere dịka nyocha akaụntụ na ịdepụta ndu. Ndị ahịa na azụmaahịa nwere ike ịme nyocha pụrụ iche n'ịntanetị, nyochaa atụmatụ, uru, ngwaahịa, ọrụ, ọkwa na nyocha.
N'agbanyeghị ụba ahịa ihe dị, 40% nke ihe eji ere ahia anaghị eji ndị ahịa. N’ụlọ ọrụ ndị n’enweghị ike ijide onwe ha, enyere ndị nnọchi anya ire ahịa ka ha nye ndị na-ewe ha n’enweghị ohere dị ukwuu ịtụnye ụtụ dị egwu. Na ụlọ ọrụ ndị dị n'ihu nke usoro ahụ, ndị nnọchi anya ire ahịa nwere ngwa agha zuru oke nke ọdịnaya niile ha chọrọ iji nyere aka chọpụta ebumnuche nke atụmanya ahụ, wuo ikike ma tụkwasị ha obi, ma duzie ha site na nkwenye n'ime usoro mkpebi.
a infographic si Qvidian na-ejegharị otu ụbọchị na ndụ nke ahịa B2B nke oge a, na-egosipụta ihe ịma aka ndị na-apụta n'ụzọ. Ndị ahịa gị ọ maara oge na otu esi eji ọdịnaya, ngwaọrụ, na ọzụzụ niile ị nyere ha ka ha wee bụrụ ndị ndụmọdụ tụkwasịrị obi ndị na-azụ ahịa na-atụ anya?
8 n'ime ahịa 10 reps na-eche ọnụọgụ nke ozi ha kwesiri inyocha, na-eme ka ha tinyekwuo oge n'ịhazi na nyochaa eziokwu. Ikike ịzaghachi ma meghachi omume na mkpa nke atụmanya ahụ dị mkpa karịa mgbe ọ bụla… na ahịa dị mkpa iji mee ka ikike ahịa nwee ike na ụlọ ọrụ ka ndị nnọchite ahịa ahụ wee nwee ike ịnye ọdịnaya ziri ezi na izipu ozi zuru oke ozugbo achọrọ ma ọ bụ rịọ ya.
Tags: nyochaa mkpansosochienchịkọta oziAjụjụ ọnụedu ọgbọahia na ire ahiakwurịtamkparita ukaugbuatụmanyaUgwuekeọdịnaya ahịaire ahiaNkwado ire ahịaonye na-ere ahịaonye na-ere ahiaService
Otu esi eme ka akpaaka na aru ahia
iOS na gam akporo App Icon Photoshop ndebiri